एक हाइड्रोजन सास परीक्षण के हो र मेरो परीक्षण परिणामको अर्थ के हो? - स्वास्थ्य शिक्षा | अगस्ट 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समुदाय, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, चेकआउट कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार कम्पनी, समाचार चेकआउट कल्याण औषधि जानकारी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस कम्पनी औषधि बनाम मित्र
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> हाइड्रोजन सास परीक्षणहरूका बारे तपाईलाई जान्नुपर्ने सबै कुरा
मतली, ईर्ष्या, अपच, पेट दुखाइ, पखाला - जठरांत्र सम्बन्धी लक्षणहरूको यो समूहले धेरै स cause्कष्ट निम्त्याउन सक्छ। र तिनीहरू प्राय: रहस्यमय हुन्छन्। यो पत्ता लगाउन गाह्रो हुन सक्दछ कि वास्तवमा के कारणले त्यो सबै पेट समस्या हुन्छ।
हाइड्रोजन सास परीक्षण प्रविष्ट गर्नुहोस्। यो सरल, गैर इनभेटिभ आकलनले तपाईको सास मा ग्यासको स्तर मापन गर्दछ किन ठ्याक्कै तपाई किन ती पेटको जटिलताहरु महसुस गरिरहनु भएको छ, चाहे यो ब्याक्टेरिया बढ्दो वा केवल सादा अपचबाट हो।
एक हाइड्रोजन सास परीक्षण कसरी काम गर्दछ?
एक हाइड्रोजन सास परीक्षण लिनु धेरै सहज प्रक्रिया हो, तर यसको तयारी आवश्यक पर्दछ। परीक्षणको अघि तपाईंको विशेष आहार हुनेछ, परीक्षणको दिनमा लगभग दुई घण्टा डाक्टरको कार्यालयमा खर्च गर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईंको नतिजाहरूको बारेमा दुई हप्ता कुर्नुहोस्।
परीक्षणको लागि तयारी गर्दै
तपाईंको डाक्टरमा निर्भर रहँदै, तयारी जुनसुकै ठाउँबाट पनि सुरू गर्न सकिन्छ चार हप्ता परीक्षाको एक दिन अघि।
एक महिना पहिले , एन्टिबायोटिक लिन रोक्नुहोस् र कोलोनोस्कोपी हुनुबाट जोगिनुहोस्।
दुई हप्ता अघि , प्रोबायोटिक्स लिन रोक्नुहोस्।
एक हप्ता अघि , रेचक प्रयोग काट, धूम्रपान र व्यायाम।
दुई दिन अघि , कुनै पनि प्रोकिनेटिक्स लिन रोक्नुहोस्।
प्रोकिनेटिक्स औषधी हो जुन साधारणतया एसिड भाटाको लागि लिइन्छ (सोच्नुहोस् रेगलान , पेपसिड , र Nexium ) गतिशीलता बढाउँदै काम। यसको मतलब उनीहरूले तपाईंको पेटको सामग्री खाली हुने समयको गति बढाउँछन्, जसले एसिड रिफ्लक्स निम्त्याउन सक्ने जुनसुकै चीजलाई हटाउँदछ — साथै हाइड्रोजन परीक्षणले पहिचान गर्न खोजिरहेका ब्याक्टेरियाहरूलाई हटाउँछ। हामी जान्न चाहन्छौं कि बिरामीले ब्याक्टेरियाको बढ्दो वृद्धि गरिरहेका छन्, भन्छन म्याकेन्जी जार्विस , D.M.Sc., एक प्रशिक्षक आन्तरिक चिकित्सा र एट्रिअम स्वास्थ्य ग्यास्ट्रोएन्टेरोलॉजी र हेपेटोलोजी मा गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजी विभागमा। यी औषधीहरूले चीजहरूलाई द्रुत गतिमा सार्न सक्दछन् र स्पष्ट जवाफ बिना नै तपाईंलाई छोड्छ।
एक दिन अघि , तपाईं एक कडा, कम-अवशिष्ट आहार अनुसरण गर्नुपर्छ। यसले फाइबरहरू, स्टार्चहरू, कार्ब्स, र चिनीमा उच्च सीमित गर्दछ। जार्विस भन्छन् पास्ता, फल, दूध, चीज, दाना रोटी, आइसक्रीम, दुग्ध उत्पाद, र सोडा। तपाईं अझै पनि कुखुरा, माछा, अण्डा, पानी, कफी, चिया, र सीमित मात्रामा सेतो रोटी र सेतो चामल पाउन सक्नुहुन्छ (किनकि तिनीहरूसँग फाइबर कम छ)।
परीक्षाको दिन , पानीबाट पन्छिन केहि खान वा पिउँदैन (जसमा सास मिन्ट्स र च्युइंग गम समावेश छ)।
तपाईको परिक्षणको दिन तपाई दुई घण्टा डाक्टरको अफिसमा खर्च गर्नुहुन्छ। पहिले, तपाईंको चिकित्सकले तपाईंलाई पिउनको लागि चिनी समाधान दिनेछ। जार्विस आफ्ना बिरामीहरुलाई ग्लूकोज पेय, र मर्सी मेडिकल सेन्टर ग्यास्ट्रोएन्टेरोलजिस्ट दिन्छ ब्रायन कर्टिन, एमडी, आफ्ना बिरामीहरूलाई कि त ग्लुकोज, ल्याक्टुलोज, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टान, वा ल्याक्टोज दिन्छ। ग्लुकोज सबैभन्दा विशिष्ट हो।
समाधान पिइसकेपछि पहिलो घण्टाको लागि, तपाईंले हरेक १ 15 मिनेटमा सास स device्कलन उपकरणमा हावामा पार्नुहुनेछ। यो टेस्ट ट्यूब जडान भएको झोला जस्तो देखिन्छ। दोस्रो घण्टामा, तपाई प्रत्येक minutes० मिनेटमा उपकरणमा हाल्नुहुनेछ। डा। कर्टिनले बिरामीहरुलाई उनीहरुको लागी उनीहरुमा केहि लक्षणहरु छ कि छैन को लागी, सम्पूर्ण परीक्षण भर भइरहेको छ को एक डायरी राख्न आग्रह गर्दछ। यसै बीच, प्रयोगशाला प्रविधिहरूले तपाईले दिने प्रत्येक सास नमूनामा हाइड्रोजन ग्यास र मिथेन ग्यासको मात्राको विश्लेषण गर्ने छ।
नक्कली वायग्रा गोलीहरू कस्तो देखिन्छन्
ग्लुकोज सानो आन्द्रामा टुक्रिन्छ, जार्विस भन्छन्। यदि सानो आन्द्रामा खराब ब्याक्टेरियाहरू छन् भने, यसले किण्वन गर्छ, ग्लूकोजको हाइड्रोजन र मिथेनको उप-उत्पादन उत्पादन गर्दछ। हामी अध्ययन पढ्छौं कि हाइड्रोजन वा मिथेनको आधारभूत रेखा पछिल्लो छ वा छैन। यदि एक वा दुबैमा वृद्धि भएको छ भने त्यसले उपचार निर्धारण गर्दछ।
केही अस्पताल प्रणालीहरूले एउटा घर परीक्षण किट प्रयोग गर्दछन्, तर किनभने उपकरणहरू प्रयोग गरिएको छ र एकदम विशेष संग्रह विधिहरू, यो अहिलेसम्म सामान्य छैन।
सामान्यतया, बिरामीहरूले उनीहरूको परीक्षण परिणामहरू दुई हप्तामा प्राप्त गर्दछन्। तपाईंको डाक्टरले परिणामहरूको विश्लेषण गर्दछ कि कहिले र जब ठूलो मात्रामा हाइड्रोजन वा मिथेन तपाईंको सासको नमूनाहरूमा देखा पर्दछ। जार्विस अफिसले आधार रेखा नमूनाको तुलनामा उनीहरूलाई सजिलो पढ्नको लागि परिणामहरू ग्राफमा कम्पाइल गर्दछ।
डा। कर्टिनका अनुसार, यदि त्यहाँ एक हाइड्रोजन वा मिथेन प्रति मिलियन वा अधिक २० अंश बढ्यो भने त्यसले समस्या दर्शाउँछ। उनले यो पनि नोट गरे कि यदि परीक्षणको क्रममा बिरामीलाई पखाला भयो भने ग्यास मूल्यलाई ध्यान दिएर परिक्षण सकारात्मक छ। परिक्षणको बखत लक्षणहरुमा बृद्धिले नेत्रदर्शी अतिसंवेदनशीलतालाई दर्शाउँछ।
एक हाइड्रोजन सास परीक्षण निदान के गर्छ?
एक हाइड्रोजन सास परीक्षण मुख्यतया एसआईबीओ, वा सानो आन्द्रा ब्याक्टेरिया ओभर ग्रोथको निदानको लागि प्रयोग गरिन्छ। तर, यो अन्य पाचन विकारहरू जस्तै:
आंत्र मेथानोजेन अत्यधिक वृद्धि (आईएमओ)
आहार शर्कराको असामान्य पाचन
द्रुत सानो आन्द्रा पारगमन समय
हाइड्रोजन सास परीक्षणले निदान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ इरिटेल बोवेल सिन्ड्रोम (IBS) नेत्रदर्शी अतिसंवेदनशीलता (वा, तीव्र पेट दुख्ने - ईरिटेल बोवेल सिन्ड्रोमको एक लक्षण) को पहिचान गरेर। तिनीहरू एक उपकरण हो जुन IBS जस्तो देखिने लक्षणहरू निम्त्याउने अन्य सर्तहरू हटाउन मद्दत गर्दछ।
भर्खरको इम्पीरियल कलेज लन्डन द्वारा अध्ययन भर्खरै फेला पर्‍यो कि हाइड्रोजन सास परीक्षणले शुरुवातमा एसोफेगल र ग्यास्ट्रिक क्यान्सर पत्ता लगाउँदछ
के मलाई थपको लागि पर्चे आवश्यक छ?
यदि तपाईं एसआईबीओ, वा सानो आन्द्रा ब्याक्टेरियाको अत्यधिक वृद्धिको साथ निदान गर्नुहुन्छ भने, यसको मतलब यो हुन्छ कि तपाईंको पेटको अन्य भागहरूबाट ब्याक्टेरियाहरू सानो आन्द्रामा स collect्कलन गर्न थालेका छन् - र ती त्यहाँ हुनु हुँदैन।
लक्षणहरूमा सामान्यत: समावेश हुन्छ:
पेटमा ब्लोटिंग वा डिस्टेन्शन
पेटको पूर्णता वा असुविधा
पूरै गन्ध ग्यास
SIBO को लागि उपचार एन्टिबायोटिकको एक गोल हो (सामान्यतया नियोमाइसिन वा augmentin )। यद्यपि उपचारको साथ, एसआईबीओ फिर्ता आउन सक्छ, विशेष गरी स्वत: प्रतिरोध रोगका बिरामीहरूमा - उनीहरूले एसआईबीओ एक महिना जति पटक पाउन सक्दछन्, जार्भिस भन्छन्।
सम्बन्धित: एन्टिबायोटिक १०१
आईएमओ, वा आन्द्रा मेथेनोजेन अत्यधिक वृद्धि, भनेको खराब ब्याक्टेरियाहरू कब्जको मुकाबले पेल गरिएको छ। तपाईंसँग एसआईबीओ जस्ता सबै समान लक्षणहरू छन्, पखाला भन्दा पनी कब्जको साथ बाहेक। उपचार पनि यस्तै हो both दुबै सामान्य एन्टिबायोटिक र एकको लागि तपाईंको पेटको लागि एक गोल, कब्जको लागि उपचार बाहेक।
सम्बन्धित: पेटको स्वास्थ्यले तपाईंको स्वास्थ्यलाई कसरी असर गर्छ
यो निदानको मतलब यो हो कि तपाईलाई शर्करा वा दुग्ध पचाउन समस्या भयो — सामान्यतया यसलाई भनिन्छ फ्रक्टोज असहिष्णुता (जसमा प्याज, आर्टिचोकस, नाशपाती, र गहुँमा फेला परेको चिनी समावेश छ) वा ल्याक्टोज असहिष्णुता (चिनी दुध उत्पादनहरूमा फेला पर्‍यो)। यो निदान, कहिलेकाँही मलाब्सर्प्शन पनि भनिन्छ, एसआईबीओमा पनि यस्तै लक्षणहरू छन्।
दुर्भाग्यवस, यी सर्तहरूको एक ईलाज छैन। यसको सट्टामा, तपाइँ तपाइँको आहारबाट केहि खानाहरू हटाएर लक्षणहरू व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं ल्याक्टोज असहिष्णु हुनुहुन्छ भने, केहि over-the-काउन्टर एन्जाइम उत्पादनहरू, जस्तै ल्याक्टैड , साथै मद्दत गर्न सक्छ। विशेष गरी जोसँग ल्याक्टोज राम्रोसँग पचाउन सक्दैन उनीहरूसँग, यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि आप पूरक खुराक मार्फत पर्याप्त क्याल्सियम पाउँदै हुनुहुन्छ।
योजना बी कत्ति चाँडो तपाईं यो लिनु पर्छ
सम्बन्धित: मैले कुन भिटामिन लिनु पर्छ?
यदि तपाईंसँग छ भने द्रुत सानो आन्द्रा पारगमन समय , यसको मतलब खाना तपाईको सानो आन्द्रामा सामान्य भन्दा छिटो गतिमा सर्छ, यसले पखाला, पेटमा दुख्ने, पेट फूल्ने र पेट फूल्ने क्रम गर्दछ। तपाईंको द्रुत ट्रान्जिट समयको लागि अन्तर्निहित कारणमा निर्भर गर्दछ, तपाईं मात्र सक्षम हुन सक्नुहुन्छ लक्षणहरूको उपचार गर्नुहोस् । एन्टिडाइरियल लिनुहोस्, कार्बोनेटेड पेयबाट बच्नुहोस्, र खानेकुरामा छाड्नुहोस् जसले अधिक ग्यास गराउन सक्छ।
हाइड्रोजन सास परीक्षण कति सही छ?
हाइड्रोजन सास परीक्षण कहिलेकाँही गलत सकारात्मक दिन सक्छ, र प्रयोग गरिएको सब्सट्रेटको आधारमा अधिक वा कम संवेदनशील उद्देश्यको हुन सक्छ। थप, केहि प्रयोगशालाहरू विभिन्न प्यारामिटरहरू प्रयोग गर्नुहोस् जब ग्यास स्तर मापन गर्न - जस्तै लामो परीक्षाको लागि हरेक minutes ० मिनेटमा सास मापन लिनु, वा परीक्षणको सुरूवातबाट हरेक minutes० मिनेटमा — जसले skew परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ। घर-परीक्षण परीक्षणको तयारी र प्रशासनमा त्रुटि को लागी बढी कोठा छ।
एक हाइड्रोजन सास परीक्षण खर्च कति हुन्छ?
हाइड्रोजन सास परीक्षणको लागि लागतहरू फरक हुन्छन्, दुबै तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र तपाईंको बीमामा निर्भर गर्दछ। नगद मूल्य $ १55- $ from०० सम्मको हुन सक्छ। तपाईको बीमा योजना जाँच गरी हेर्नुहोस् कि जाँच वा कुनै औषधि कभर गरिएको छ कि छैन भनेर। वा, लागत कम गर्ने तरिकाहरूको बारेमा तपाईंको डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।
हाइड्रोजन सास परीक्षण सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग, एसआईबीओ र आईएमओ निदानको लागि रुचाइएको विकल्प हो। केहि अधिक महँगो, अधिक आक्रमणकारी विकल्प अवस्थित छन्। एउटामा माथिल्लो एन्डोस्कोपी समावेश हुन्छ जुन एक डाक्टरले तपाईंको सानो आन्द्राबाट तरल पदार्थको आकांक्षा गर्दछ। अर्कोले तपाईंले निलिने क्याप्सुल प्रयोग गर्दछ। यसले तरल पदार्थ सlects्कलन गर्दछ जुन डाक्टरहरूले त्यसपछि सानो आन्द्रामा ब्याक्टेरियाहरूको संख्या गणना गर्न प्रयोग गर्दछ।
यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँसँग SIBO वा IMO हुन सक्छ, तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् कि जाँच गर्नुहोस् तपाइँको लागी सही छ कि छैन।
बिरालाको एलर्जीको लागि तपाईले के लिन सक्नुहुन्छ
एक प्राकृतिक रेचक के छ जुन छिटो काम गर्दछ
xanax पछि म कसरी एम्बियन लिन सक्छु?
कसलाई चिन्ताका विकारहरू आउँछन् र ती कसरी साधारण हुन्
मधुमेह रोगीहरूको लागि उच्च रगतमा चिनी पढाइ के हो
टाइप २ मधुमेह भएको अमेरिकीहरूको संख्या